iPhone 11 Pro Max Model Isa A2161, A2218, A2220 - Fitaovana
iPhone 11 Pro Max Model Isa (A2161, A2218, A2220)
Ny iPhone 11 Pro Max dia iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra hita eny an-tsena. Hihena tsy ho ela ny vidiny. Ny fandefasana iPhone farany farany dia mampihena hatrany ny vidin'ny taranaka teo aloha. Misy maodely tsy manam-paharoa taonina azo ampiasaina ho an'ilay fitaovana. Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka momba ny isa maodelin'ilay fitaovana isika. Apple dia mandefa kinova samihafa amin'ny fitaovana iray ihany, arakaraka ny takiana isam-paritra.
Ny Pro max dia manana efijery midadasika, izay fivarotana lehibe amin'ny fitaovana. Mpampiasa maro no manantena ny hahazo ity fitaovana ity.
Famaritana iPhone 11 Pro Max:
Ny isa iPhone 11 Pro Max Model dia misy A2161, A2218, A2220. Ireny modely telo ireny dia miavaka amin'ny fombany. Ny fiasa ilaina amin'ny fitaovana dia mijanona ho iray ihany. Ny iPhone 11 Pro Max dia manolotra faran'izay avo lenta sy fampisehoana miloko. Andao hodinihintsika ireo fiasa mahazatra azo alaina ho an'ny mpampiasa iPhone 11 Pro max rehetra. Ireo dia hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara kokoa rehefa mividy. Ny kinova Pro dia namaritra ny fomba fahitan'ny mpampiasa ny iPhone hatramin'ny taona lasa.
Ny iPhone 11 Pro max dia iray amin'ireo fitaovana Apple voalohany tonga miaraka amin'ny fampisehoana mivelatra. Izy io dia manana fampisehoana malaza indrindra amin'ny 6.5 ''. Tsy mampino amin'ny fampiasana mahazatra anao. Na iza na iza dia afaka mampiasa ireto efijery marobe ireto mba hankafizany mora foana ny atiny. Ny mpampiasa dia mahazo ny efitrano ho an'ny fivezivezena sy filalaovana mora amin'ny sehatra misy azy ireo.
Ny haben'ny efijery lehibe kokoa dia manome anao toerana hankafizana mora jerena. Izy io koa dia fampisehoana Super Retina XDR OLED. Ho madio sy mazava ny kalitaon'ny sary.
2. Ireo fakantsary
Mahazo ny fametrahana fakan-tsary telo miaraka amin'ity fitaovana mahafinaritra ity, izay mety amin'ny fampiasana maharitra. Afaka mampiasa izany ny mpampiasa mba hahazoana antoka fa mahazo sary avo lenta izy ireo. Ny rafitra dia mety amin'ny tifitra hazavana ambany sy sary maro hafa. Apple dia mandinika tsara ireo antsipiriany madinidinika. Azonao atao ny mahita fa mahazo sary maranitra sy marina ireo fakantsary.
Izy io koa dia tsara ho an'ny horonantsary 4K sy atiny ultra-wide. Ny fanamboarana solomaso telo dia manome anao fahasamihafana amin'ny sary sy horonan-tsary.
3. ID amin'ny tarehy
Apple dia manao ny teknolojia Face ID ho lohalaharana amin'ny fiarovana. Ny iPhone 11 Pro Max dia mampiasa an'io mora be. Ny mpampiasa dia afaka mamoha ny fitaovany amin'ny fomba mora ampiasaina. Fomba tena mandaitra io fa mitaky anao haneho ny tavanao eo alohan'ny fakan-tsary.
Apple dia mamerina ny famohana paingotra ho an'ireo mpampiasa miatrika olana amin'ny Face ID noho ny lazan'ireo endrika 2020.
Ny maodely iPhone 11 Pro Max koa dia mahomby amin'ny resaka fanjifana herinaratra. Tsy mila mandoa azy foana ianao. Mahazo charger ao anaty boaty ihany koa ireo mpampiasa miaraka amin'ity fividianana ity. Ny lamosin'ny vera dia mamela anao hisambotra finday tsy misy tariby koa. Fanampiny tena tsara ho an'ireo mpampiasa manantena ny hanapaka ny korontana. Ny puce A13 dia manome antoka koa fa lehibe ny fitantanana herinaratra.
Ireto ny sasany amin'ireo endri-javatra mahazatra izay ho hitanao amin'ny maodely iPhone 11 Pro Max. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mividy ny iPhone 11 Pro max amin'ny taha ambany. Ny iPhone 12 dia hitarika amin'ny fihenan'ny vidin-javatra manerantany.
iPhone 11 Pro Max Model Isa:
Ity fizarana ity dia hijery ireo fampahalalana manokana momba ny maodely iPhone 11 Pro Max. Ireo maodely telo dia misy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Azonao atao ny manamarina ny modely misy anao. Ireto ny pitsopitsony izay tokony ho fantatrao.
Ny iPhone 11 Pro Max A2161 no maodely azo amidy any Etazonia. Io no kinova malaza indrindra amin'ireo mpampiasa ankehitriny. Mihanaka be koa io any Canada, faritanin'ny Virgin Island US, ary Puerto Rico. Ny telefaona dia mifanaraka amin'ireo tambajotra GSM sy CDMA ao amin'ireo faritra ireo. Ny kinova tsy voavaha amin'ny fitaovana dia afaka mihazakazaka tsara ny karatra sim rehetra. Ny telefaona dia manohana tombony ho an'ny mpampiasa sim. Afaka manana mpitatitra roa samy hafa ianao amin'ny alàlan'ny fividiananao. Ny singa sim sy sim ara-batana dia manome tombony ho an'ny sim roa.
Ny iPhone 11 Pro Max A2218 dia ilay kinova izay malaza amin'ny ankamaroan'ny firenena any Eropa sy Azia. Afaka mahazo an'io maodely io ny mpampiasa any Aostralia, UK, France, Singapore, Taiwan, sns.Mihanaka be any Japon ihany koa. Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ilay maodely mora foana. Ny kinova Japoney dia misy feon-javamisy rehefa manindry sary ny mpampiasa. Ny fandaminana dia manohana ihany koa ny sim roa ho an'ny fifandraisana azo idirana. Izy io dia azo antsoina hoe kinovan'ny EU an'ny iPhone. Ireo mpitatitra tohanan'ny fitaovana dia miovaova arakaraka ny faritra.
Ny kinova A2220 an'ny iPhone dia tsy misy afa-tsy ho an'ny faritra Shina sy Hong Kong. Ny firenena dia manana fitsipika henjana ho an'ireo fitaovana tohanan'ny Internet. Ireo mpampiasa dia mila mampiasa vola amin'ny endrika tsy manam-paharoa amin'ny iPhone. Ny fitaovana dia manohana fiasa sim indroa fa tsy misy ny esim mahazatra. Ireo mpampiasa dia mahazo lozisialy sim faharoa amin'ny iPhone.
Ny maodely ihany koa dia tsy mitondra afa-tsy mpitatitra sinoa voafetra sy Hong Kong voafetra ihany.Ireto ny pitsopitsony tena ilaina momba ny maodely iPhone 11 Pro Max. Antenainay fa ny mpitari-dalana anay dia mamaly ny fanontanianao rehetra momba izany.
Ny iPhone 11 Pro Max dia miaraka amina kinova maodely maro tsy manam-paharoa. Ireo maodely telo lehibe dia voarakitra ao amin'ity torolàlana ity.
Afaka manamarina ny fahasamihafana haingana ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity. Manantena izahay izao fa afaka mividy fividianana mandanjalanja araka ny faritra misy anao ianao.
Box Android TV tsara indrindra
6 VPN tsara indrindra ho an'ny Netflix
Fisandratana Robots na Ahoana no hanombohana Automation an-trano
Ny Tale Jeneralin'ny Pawn Stars Rick Harrison dia manana tombony amin'ny harato!
lalao azonao lalaovina amin'ny solosaina any an-tsekoly
mijery mandeha amin'ny mpametaka style
ny fomba filalaovana kilalao amin'ny solosaina any an-tsekoly
netflix misoratra anarana tsy mandeha
roblox ny fomba hijerena fps
ny fomba ahazoana kaody psn maimaim-poana 2017